आहा ! रारा गोल्ड कप... :: सुजिता कार्की :: Setopati
आहा ! रारा गोल्ड कप फूटबल प्रतियोगितामा दुई विदेशीसहित १२ टिम,दर्शकलाई स्कूटर पुरस्कार
सागर राज तिमिल्सिना पोखरा, पुस २५
सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा सञ्चालन हुने आहा ! रारा गोल्ड कप फूटबल प्रतियोगिताको १७ औं संस्करणमा दुई विदेशीसहित १२ टिमको सहभागिता जनाउने भएका छन् । माघ ९ गतदेखि २० गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा भारत र बंगलादेशकासहित १२ टिम सहभागी हुने मंगलबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले जानकारी दिएको छ।
प्रतियोगितामा बंगलादेशको उत्तर बरिन्धरा क्लब, भारतको यूनाईटेड सिक्किम फूटबल क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब, थ्री–स्टार क्लब, संकटा क्लब, रमपम झापा एघार फुटबल क्लब, धरान फुटबल क्लब, सुदूरपश्चिमाञ्चल एघार स्पोर्टिङ क्लब, तीन वटा विभागीय नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र आयोजक सहारा क्लबले सहभागिता जनाउने क्लबका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले जानकारी दिए।
क्लबले पुरस्कार राशीमा समेत वृद्धि गरेको उनले जानकारी दिए । प्रतियोगितमा विजेताले उपाधिसहित ७ लाख १ हजार, उपविजेताले ३ लाख ५१ हजार प्राप्त गर्नेछ । गत वर्ष विजेताले ५ लाख १ हजार, उपविजेताले २ लाख ५१ हजार प्रदान गरेको थियो ।
यस वर्षको आहा! रारा गोल्ड कप हेर्न भाग्यशाली एक जना दर्शकलाई सहारा हङकङबाट स्कूटर प्रदान गरिने थापाले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष प्रदान गरिँदै आएको भाग्यशाली दर्शक उपहार सुनको सिक्रीबाट वृद्धि गरी स्कूटर प्रदान गरिने र अर्को एक जना भाग्यशाली दर्शकलाई एकथान एलजी टिभी प्राप्त गर्ने बताए ।
प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब ९० लाख खर्च लाग्ने र १ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए। बचत भएको रकम सहारा एकेडेमीमा रहेका बालकलाई खर्च गरिने थापाले बताए। सहारा एकेडेमीमा हाल १६ जिल्लाका २८ जना बालकहरू छन्।
पोखरा रङ्गशालाको फूटबल मैदान अन्तरराष्ट्रियस्तरको निर्माणको लागि हाल ग्लोबल टेण्डर आव्हान भई, पुरानो प्यारापिट भत्काउने कार्य भई रहेकोले क्लबले कृत्रिम प्यारापिट (स्काई फोल्डिङ) निर्माण गर्ने भएको छ। प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक हिमश्री फुड्स प्रालिको उत्पादन आहा तथा रारा तयारी चाउचाउ रहेको छ भने सहारा क्लब अष्ट्रेलिया दोश्रो पुरस्कार प्रायोजकको रूपमा रहेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २५, २०७४, ०२:१२:२८